Onye Na-aza Nyocha Gị? Nkwado Mere Mfe | Martech Zone
Icchọta nzaghachi ndị ahịa tupu, n'oge, na mgbe ịmalite usoro azụmaahịa ọhụụ bụ ụzọ dị mma iji chọpụta etu ị si ele ndị ahịa gị anya. Chọghị iche n’echiche na ịmara etu ahịa gị (30, 45 afọ nne na-arụ ọrụ, dịka ọmụmaatụ) si ele ihe ị na-eme anya, ọkachasị ebe ọ bụ na ọ dị mfe ịjụ onwe gị. Ozi ọma maka ndị na - ere ahịa, ma ị na - arụ ọrụ na nnukwu ụlọ ọrụ ma ọ bụ obere mmalite, bụ na enwere ọtụtụ ngwaọrụ dị iche iche iji nyere gị aka rụọ ọrụ nke iru nyocha ahịa gị, n'agbanyeghị mmefu ego gị ma ọ bụ ọkwa gị. nke nka.
Zipu ihe nyocha intaneti ịmụtakwu banyere ndị ahịa gị, mmetụta ha na-enwe banyere ngwaahịa ọhụrụ gị, ihe ha ga-achọ ịhụ n'aka gị n'ọdịnihu, yana ụdị ozi izi ozi ga-akacha emetụta ha. Have nwere nhọrọ nke nyochaa ndị ahịa gị ozugbo, ma ọ bụ ịnwere ike ịgafe ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ iji zụta echiche nke ndị na-aza gị. Na SurveyMonkey, anyị na-enye SurveyMonkey ege ntị iji jikọọ gị na ndị ahịa na ndị nwere oke ị ga - achọ iru.
Ma gịnị ma ọ bụrụ na onye nyocha gị, onye na-ekwu na ọ bụ onye Mexico dị afọ 35 nke na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ nlekọta ahụike ma nwee ụmụaka 2, bụ n'ezie onye ọcha dị afọ 18, nke na-enweghị ọrụ aha ya bụ Frank? Mkpebi ị mere na nsonaazụ nyocha afọ ojuju ndị ahịa gị bụ naanị ntụkwasị obi dịka ozi ị nwere gbasara ndị na-enyocha nyocha gị.
At SurveyMonkey, anyị nwere ndị otu niile na-arụ ọrụ iji chọpụta ụzọ kachasị mma iji gosipụta njirimara nke ndị nyocha nyocha. Na Ezigbo TrueSample otu na-arụ ọrụ na RealCheck Nzipu na RealCheck Social, ihe ngwọta nke na-enyocha njirimara nke ndị na-aza ajụjụ site na aha na adreesị na adreesị ozi-e, n'otu n'otu. Uzo abuo a iji nweta nkwado a na-eme iji gosiputa njirimara nke o siri ike ikwado ndi nzaghachi, dika ndi 18 rue 24 (gbaghara Frank).
Anyị nwekwara Dr. Phil na ndị otu ya usoro nyocha ndị na-arụ ọrụ ịmata ndị pesky afọ ojuju, ndị mmadụ ọsọ site gị nnyocha e mere na-enweghị-enye ya oge na uche na ya kwesịrị. Usoro Dr. Phil na-adabere Ntinye Bayesian.
Kwado njirimara nke ndị na-aza ajụjụ bụ ma nkà ma sayensị, mana ozi ọma ahụ bụ na ọ bụghị naanị gị na-achọ ịchọta ndị kachasị mma, ndị a tụkwasịrị obi na-aza ajụjụ. Enwere ụfọdụ ndị maara ihe nke na-amagharị ma na-atụgharị n'abalị, na-enweghị ike ihi ụra na-eche echiche banyere ụzọ kachasị mma iji kwado gị. Kpọrọ. N'ihi na ndị ka mma, ndị na-aza ajụjụ nyocha emere ka ọ pụta ìhè. Nsonaazụ nyocha a tụkwasịrị obi pụtara mkpebi ka mma dabere na nsonaazụ ndị ahụ. Mkpebi ka mma na-eme ka ị dị mma, nke na-eme anyị obi ụtọ. Onye ọ bụla na-enweta mmeri. Ewezuga Frank.
Tags: RealCheck Nzipu oziRealCheck na-elekọta mmadụonye nyocha nyochaSurveyMonkeyEzi Ntụlevalidate
Iji Pinterest mee ndị ọrụ ma bulie SEO
Feb 19, 2016 na 12:37 PM
Ndewo Hana, enwere stats ọ bụla na-akwado nyocha nke SurveyMonkey iji bụrụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi ma dị ire? Achọrọ m iji ya maka ọrụ nyocha ma gosipụta izi ezi na ntụkwasị obi.